XOG: Dallado Imaaraati & Ruush ah oo doonaya inay iibsadaan AC Milan! – Gool FM
Bixinta qaamihii hore oo ay la legdamayso!
(Milano) 15 Feb 2018 – Waloow horraantii sanadkii tegey uun la iibsadey kooxda Rossoneri misna weli kala cadda aayaha kooxdaasi oo waxaa dhici karta inay gacan kale sii gasho, taasoo hadba ku xirraan doonta sida loo dabaro qaanta Elliott Management Corporation. Haddii la bixiyo waxaa kooxda sii wadanaya Yonghong Li, haddii kale waxaa furmaya jihooyin cusub.
Warsidaha La Repubblica ayaa saaka qoraya in ay dalalka United Arab Emirates iyo Russia kasoo muuqanayaan laba dhinac oo doonaya inay nus bilyan ku iibsadaan kooxdan, iyagoo isha ku haya isbeddelka iyo tadawurka naadiga Rossoneri.
Shirkad Imaaraati ah oo aan magaceeda la shaacinin balse saldhigata Dubai ayuu muddo dalabkeedu miiska saaran yahay, balse markan waxaa kusoo biiray dallad Ruushan ah. Dalladdaa Ruushka ah oo xiriir la leh Alisher Usmanov, oo ah nin leh wershado balaastiigga iyo birta shiila isla markaana saami ku leh kooxda Arsenal.
Ninkan ganacsadaha ah ee bilyineerka ah ee Uzbek-Russian-ka ah ayaa haysta hanti gaareeysa 12.9 bilyan (12 bilyan iyo 9 milyan oo euro) sida ay qabto Forbes, ayaa mar aan dhowayn Silvio Berlusconi ugu soo geed fariistay inuu ka iibiyo AC Milan, isagoo soo maraya madaxwaynaha Ruushka ee Vladimir Putin oo ay labada ninba saaxiib yihiin.
Yeelkeede, Abriil 13, 2017 ayay Fininvest kooxda Milan ka iibisey Yonghong Li. Waase la arki doonaa in uu ganacsadahan Chinese-ka ihi kooxda sii haysan doono iyo haddii uu markale sii iibin doono, taasoo ah sennaariyo aad suurtagal u ah.
Dhanka kale, AC Milan ayaa haatan ku howllan qorshe ay €250m ugu bixinayso qaamihii Elliott Management, taasoo ay ka doonayso Merrill Lynch si uu Yonghong Li u helo waqti badan oo uu ku neefsado.
Saddex shax macquul ah oo ay Arsenal ku wajihi karto Ostersunds F.